स्वागतम् स्वागतम् पाहुनालाई: 2008
ओझेल पर्दै गएका मनमोहनलाइ चियाउंदा
२०५६ मा नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको देहान्त भएको थियो । एमालेको विभाजनसंगै थपिएको चुनौतिको सामना गर्नेक्रममा थपिएको धपेडिका कारण चुनावी सभालाइ सम्बोधन गर्दागर्दै बोहोस भएका अधिकारी उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । आज उनै अधिकारीको नवौं स्मृती दिवस हो । तर,कत्तिले सम्भिएका छन अधिकारीलाइ ? माले हुंदै नेकपा एमालेको उदयसंगै मनमोहन अधिकारी त्यसको अध्यक्षको रुपमा उदाएका थिए । अनी त्यसको महासचिव थिए मदन भण्डारी । यि दुबैको योगदानले नेपालमा कम्युनिष्टको परिभाषामा परिर्वतन मात्र भएन जनतामाझ लोकप्रिय समेत बनेको थियो । एकाएक दासढुंगा हत्याकाण्ड भयो । लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीको हत्या भयो । त्यसपछि एमालेको बागडोर सम्हाल्ने सबै जिम्मेवारी अधिकारीको हातमा आएको थियो । अनी महासचिवको रुपमा उदाय माधवकुमार नेपाल ।मनमोहनको कुशल नेतृत्वका कारण २०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापीत भयो । यसैको कारण उसले सरकारको नेतृत्वको अवसर समेत पायो । त्यही बेला हो अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका । तर,उनले धेरै लामो समय सरकार चलाउन सकेनन । र ९ महिनामा एमालेको सरकार ढल्यो । पार्टीमा बढ्द्यै गएको आन्तरिक विवादका कारण बहुमतको सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको एमाले कमजोर शक्ति बन्यो र २०५६ मा पुन कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा आएको थियो ।अधिकारीलाइ प्रत्यक्ष रुपमा निकट भएर बुझ्ने अवसर त पाइएन । तर,उनको देहान्तपछि उनका बारेमा भएका चर्चा सुन्दा उनी कुशल संयोजनकारी नेताका रुपमा चिनिएका रहेछन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रजातन्त्रवादी र बामपन्थीविचको सहकार्यका लागि उनको योगदान स्मरणिय रहेको छ । एमालेको मुल नीति मदन भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनवाद हो । अहिलेसम्म एमालेको मुल राजनीतिक दस्तावेज भनेको जवज नै हो । जवजको अभ्यासकै चरणमा भण्डारीको हत्या भयो । अनी तयसलाइ हर्ुकाउने काम अधिकारीले गरेका थिए ।
१९५० को सन्धी खारेजीको माग गर्ने माओवादी अहिले आएर सन्धी पुनरावलोकनको पक्षमा झरेको छ । तर, हामीले विर्सनु हुन्न भारतिय सरकार समक्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा औपचारिक रुपमा सन्धी संशोधनको प्रस्ताव राख्ने नेता मनमोहन नै हुन । अहिले नेपाल माओमय बनेको अवस्थामा अधिकारी विस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका छन । राजनीतिको शब्दकोषमा आराम भन्ने शब्द हुन्न भन्ने अधिकारीप्रति हार्दीक स्मरण ।
साभार बिचार प्रधान ब्लॉग
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 1:19 PM
खै त जनताको मनसम्म पुगेको गणतन्त्र ?
संविधानसभा निर्वाचन भयो, राजा फ्याँकियो, देशमा गणतन्त्र आयो, राष्ट्रपति चयन गरियो, उपराष्ट्रपति चयन गरियो । र, गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री पनि चयन गरियो । यो सब नयाँ नेपाल बनाउन गरिएको हो । तर, गणतन्त्र जनतालाई अझै स्पर्श गर्न सकेको छैन । परिवर्तनको महशुस र भावी नयाँ नेपालको सुदूर क्षितिजमा कालो बादल मडारिन अझै छोडेको छैन । बरु नयाँ र पुरानाबीचको ठक्कर जारी नै छ। त्यसैले जनजनको मनमा अहिले यो परिवर्तन पनि २०४६ सालकै परिवर्तनजस्तो हुने त होइन ? प्रश्न उब्जेको छ ।दलहरु पद, पैसा र शक्तिकै पछाडी दौडिएका छन् । जुन सत्तामा पुग्यो, दुई सय प्रतिशत त्यही पार्टीको कार्यकर्ता भनेर हालीमुहाली गर्ने विगतको परम्परा दश वर्षे जनयुद्धबाट आएको भनिएको नेकपा माओवादीलाई पनि थिलथिलो बनाइसकेको छ। विगतमा रगत, आँशु, पसिना, श्रम, सिर्जना र समय सबै खर्चेकाहरु अहिले ओझेल पर्दै गएका छन् । यहाँ उनीहरुले केही पाइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, छिटछिटो भेष बदल्न सक्नेहरुले लखनउ लुट मच्चाउन सुरु गरिसकेकाले विगतमा जस्तै हुने आशंकाहरु जनमनमा मडाएकिा हुन् । सबैलाई थाहा छ, जनयुद्ध प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र भएको होइन । प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नेले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ भन्ने विश्वासका साथ गरिएको हो । जनआन्दोलन दुईमा बगेको रगत र जनयुद्धमा बगेको रगतको मूल्य चाकडी, चाप्लुसी र जी हजुरी गर्नेका लागि किमार्थ होइन । तर भइरहेको त्यही छ । देश विकृति र विसंगतिको सगरमाथामा उभिएको छ। निश्चिय नै यो बेला सबै सहीसही हुन्छ त्यो होइन । तर, सही गर्ने संकेत र लक्षणहरु देखिनुपर्छ नै । त्यसमा कतै विलम्ब र दिशा गलत भइरहेको त छैन त्यो चासोको कुरा हो । किनभने देश र समाजलाई विकृति विसंगतिमुक्त पार्छु भनेर लागेकाहरु धेरैजसो त्यही फसेको तीतो विगत ताजै छ । धन, सम्पत्ति, यश आराम मानवीय महत्वकांक्षा हो । त्यसलाई दमन गर्न ठुलै शक्ति आवश्यक पर्छ । आन्दोलन, संघर्ष र लडाईको मैदानमा सबै प्रतिवद्धता र प्रतिवद्ध हुनु एउटा कुरा हो । तर, कार्यन्वयनको चरणसम्म पनि त्यो कायम रहनु अर्को कुरा हो । अहिले पनि महंगी, अभाव, आतंकका खाडलहरु पाइलापाइलामा छन् । वर्तमानलाई हेर्दा जनताले हरेश खाइरहेका छन् । तर, केही ठेकेदारहरु भने जुकाझैं मोटाइ नै रहेका छन् । जस्तो कि महंगी । महंगीबाट मारमा पर्ने एउटै वर्ग जनता हुन् । व्यापारी, नेता, व्यवसायी कहिले पनि घाटामा जाँदैन । त्यसमाथि नेपालमा कतिपय यस्ता प्रवृत्ति र परम्परा छ जुन संसारमा कतै मात्र होला । जस्तो कि नेपालमा नभएको इन्धन सरकारले ल्याएर कमिसन दिएर बेच्न दिदा पनि व्यवसायीले पुनः नाफा मात्र निकाल्दैन । उसले मिसावट पनि गर्छ । यो सबै दलको चुनाव खर्च उठाउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि बनेको छ। किनभने यसबाट हुने मुल्यवृद्धिले सागदेखि चामलसम्मको भाउ बढ्छ । अर्को अचम्मको परम्परा छ नेपालका सडकहरुमा । काठमाडौ उपत्यकामा कुनै पनि गाडीमा चड्ने वित्तिकै निश्चित तोकिएको भाडा लाग्छ । तर, यहाँ लामो र छोटो दुरीमा भाडा कम वा बढी हुँदैन । यसो गर्दा भाडा कम भए हुने हो तर त्यो पनि होइन । सुरुमा चढ्ने वित्तिकै १३ रुपैयाँ त्यसपछि एक किलोमिटरको दुई रुपैयाँ माथि । अझ त्यो बाटोमा निश्चित कम्पनी वा संगठनले मात्र गाडी चलाउन पाउछन् । विना कुनै प्रतिस्पर्धा । यस्तो पनि कहि होला ?जे होस् निराशा प्रगतिको बाधक हो भन्ने मान्ने हो भने त्यसो गर्न हुँदैन । त्यसैले रुन नसकेर कठीन रुपमा हाँसिरहेका नेपालीहरु पनि भविष्यप्रति आशावादी नै छन् । त्यसैले वर्तमान राज्य संचालनकहरुले सोच्ने छन् ।अहिले चार्चा कोसी बाँधको छ । नेपालमा यसले झण्डै एक लाखलाई प्रभावित पारेको छ। भारतमा २५ लाख बढीलाई प्रभाव पारेको भारतीय संचार माध्यमहरुले बताइरहेका छन् । उनीहरु के पनि भनिरहेका छन् भने नेपालले पानी छोडेका कारण भारतको बिहार डुब्यो । यहाँ मज्जाले हास्नु पर्छ । किनभने नेपाल आउने हरेक सामानदेखि इन्धन आयातमा समेत रोक लगाएको भारतले त्यही ठानेछ । तर, सत्य के हो भने प्राकृति रुपमा बग्ने पानी नेपालले मात्र होइन भारतले पनि रोक्न सक्दैन । बरु यसैले रोक्ने प्रयास गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो कुरा छिमेकी भारतले पनि बुझ्ने हो भने कति राम्रो हुने थियो होला ।
साभार स्वतंत्र नेपाल
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 11:45 AM
बिहे गर्ने बहानामा सामुहिक बलात्कार
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । आइतबार विवाह गर्ने भन्दै पिपलाडी-३ का एक युवकले फकाई आफूलाई बेलौरी रोडसागै जोडिएको जनज्योति सामुदायिक वनमा लगी बलात्कार गरेको पीडित युवतीले बताइन् ।ती युवतीले आफूलाई दीपक झा भन्ने केटाले "विवाह गर्छु "भनेर ल्याएको र राति भएपछि सागै रहेका आठ जनाले आफूलाई पालैपालो बलात्कार गरेको बताइन् ।बलात्कार गरेपछि बेहोस अवस्थामा रहेकी ती युवतीको स्थानीय बासिन्दाले उद्धार गरेका थिए । बिहान होसमा आएपछि उनले बलात्कारको घटनाबारे स्थानीय बासिन्दालाई बताएकी हुन् ।ती युवतीले बलात्कारमा संलग्नहरुको नाम थाहा नभएको बताएकी छिन् । हिड्न नसक्ने अवस्था रहेकी उनलाई स्थानीय बासिन्दाले बिहान आठ बजेको बसमा राखी महेन्द्रनगरतर्फ पठाएका थिए ।प्रहरीले सो युवती बलात्कृत भएको खबर अहिलेसम्म जानकारीमा नआएको बताएको छ ।
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 11:34 AM
एमालेको आक्रमणमा माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु, बैरेनीमा कर्फ्यु
शनिबार साँझ धादिङको वैरेनी गाविस-९ मा भएको विवादपछि दक्षिणी क्षेत्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी नेकपा माओवादीका एक कार्यकर्ताको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले राति १० बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।युथ फोर्सका कार्यकर्ताले आइतबार दिउँसो आदमघाटस्थित वाइसीएल क्षेत्रीय कार्यालयमा हमला गरी माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । मृत्यु हुनेमा धादिङ पिडा गाविस-१ बस्ने कृष्णबहादुर भण्डारी भएको नेकपा -माओवादी) धादिङले जनाएको छ । सो घटनाको विरोधमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले राति अबेरसम्म प्रदर्शन जारी राखेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा बैरेनीस्थित एक पेट्रोल पम्पमा आगजनी भएको छ।
यसैबीच तराई मुक्ति सेनाका कार्यकर्ताले सप्तरीमा अपहरणपछि आइतबार एक सर्वसाधारणको गोली हानी हत्या गरेका छन् । हत्या गरिएकामा मल्हनियाँ गाविस-९ निवासी ३६ वषर्ीय मागैन यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।गाउँनजिकैको बजारबाट फर्किँदै गर्दा हिजो राति ९ बजेतिर अपहरणमा परेका यादवको मृत शरीर प्रहरीले आज साँझ बलान खोला किनारमा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।हत्याको जिम्मा लिँदै तराई मुक्ति सेनाका ५ नं। क्षेत्रीय इन्चार्ज अविरलले अज्ञातस्थलबाट फोन सम्पर्क गरी यादवलाई आफ्नो सङ्गठनविरुद्ध सुराकी तथा गाउँमा आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेकाले कारवाही गरिएको सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् ।
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 6:34 PM